Sababaha keena xanuunka shalalka - BBC News Somali
Dadka shaqeeya saacadaha badan ayey suuragal tahay inuu ku dhaco xanuunka shalalka (Stroke) sida lagu ogaaday baaris lagu sameeyay in ka badan hal milyan oo ruux.
Xogta oo lagu daabacay wargeyska daawada ee Lancet, ayaa muujineysa in halista xanuunka shalalka (Stroke) ay kororto marka la shaqeeyo wixii dhaafsiisan saacadaha caadiga ah ee 9am ilaa 5pm. Xiriirka ka dhexeeya lama oga, balse waxaa ku jiray xogta culeyska iyo cadaadiska shaqooyinka iyo saameynta dhibaatooyinka nolosha. Qubarada ayaa ku taliyay in dadka shaqeeya saacadaha badan ay tahay inay la socdaan dhiigkarkooda.
Daraasadda ayaa lagu ogaaday isbarbardhig lagu sameeyay 35 ilaa 40 saacadood oo shaqo ah todobaadkii, hadii laga dhigo 48 saac ay kordhineyso 10% qatarta iyadoo hadii la shaqeeyana 54 saac ay gaareyso qatarta 27%, halka wixii ka badan 55 saac ay tahay 33%.
Dr Mika Kivimaki oo ka tirsan University College London, ayaa sheegay in kooxda shaqeysa 35 ilaa 40 saac ay shan ka hooseeyaan kunkii shaqaalo ee tobankii sano uu ku dhaco xanuunka marka loo fiiriyo kuwa shaqeeya 55 saac iyo wixii ka badan. Wuxuuna dhakhtarku sheegay in daraasadda ay mareyso heerkeedii ugu horeeyay ee lagu fahmayo waxa socda.
Arrimaha daraasadda ayaa waxaa ku jira welwelka saacadaha badan oo la shaqeyo iyo fadhiga waqtiga dheer inay caafimaadka u daran yihiin, ayna kordhinayaan qatarta shalalka.
Arrimaha lagu taliyay waxaa ka mid ah, in si joogta loo la socdo dhiigkarka iyo hadii qofku ka shakiyo xanuunka shalalka inuu la xiriiro dhakhtarkiisa.